यी मान्छे यति वि’षालु पा’दछन् कि २० फिट दूरीसम्मको लामखुट्टे म’र्छन् ! आखिर खान्छन् के ? -
यी मान्छे यति वि’षालु पा’दछन् कि २० फिट दूरीसम्मको लामखुट्टे म’र्छन् ! आखिर खान्छन् के ?
एजेन्सी। तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्नेछ, तर यो धेरै छिटाे नै चर्चामा आइरहेको छ कि एक मान्छेको पा’दबाट लामखुट्टे म’र्न सक्छ । युगान्डाका एक व्यक्ति यस्ता छन जसकाे वि’षालु ग्यासमा यति शक्ति छ कि लामखुट्टे पनि यसको कारणले म’र्दछन् । अविश्वसनीय, तर अब वैज्ञानिकहरूले यी मान्छेको पादको केमिकल अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
यी मानिसको पा’दमा यति शक्ति छ कि ६ मिटर (करिब २० फिट) को दूरीसम्म सबै लामखुट्टे म’र्छन् । यो समाचार द मिरर अखबारले प्रकाशित गरेको छ। उसका अनुसार, यी व्यक्तिले आफ्नो वि’षालु पा’दको प्रभाव पर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
४८ बर्षे यी मान्छेको नाम जो वामिरामा हाे । उनको दाबी छ कि अब उनकाे पा’दबाट लामखुट्टे मा’र्ने आैसधि बनाउन जाँदै छन् । यसका लागि, एक कम्पनीले उनलाई भाडामा लिएको छ । जो वामिरामाले भने कि केही वैज्ञानिकहरुले उनिलाई आफ्नो वि’षालु पादकाे रसायनकाे अध्ययन गर्न कोष प्रदान गर्दैछन् ।
अफ्रिकी देश युगान्डामा बस्ने यी व्यक्तिले आफ्नो पादको कारणले गाउँलाई नै मलेरियाबाट बचाएका छन् । उनकाे दा’बी छ कि उनले आफ्नो वि’षालु ग्यासले लामखुट्टे मा’र्न सक्छन् ।
कस्तो बिडम्बना ! एकै परिवारका छ जना गु’मे, दा’गबत्ती समेत दिने कोही…